बि.सं.२०७४ साल पौष १ गते शनिवारको राशिफल
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ पौष १ शनिबार |
नेपाली मितिः वि.सं. २०७४ । नेपाल सं. ११३८ । योग सं. ३८ । पौष महिनाको १ गते शनिवार ।
अँग्रजी मितिः ई.सं. २०१७ डिसेम्बर महिनाको १६ तारिख ।
तिथीः दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु पौषकृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथी, ०७ः३६ बजेपछि चतुर्दशी तिथी ।
योगः धृति योग ।
नक्षत्रः अनुराधा नक्षत्र ।
करणः वणिज करण ०७ः३५ बजेसम्म उपरान्त भद्रा करण ।
काठमाडौंमा सूर्योदयः ०६ः४९ बजे ।
काठमाडौंमा सूर्यास्तः १७ः०९ बजे ।
राहुकालः ०९ः२३ बजेपछि १०ः४१ बजेसम्म ।
मेष राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन विपरित रहेको हुनाले अल्लि सोँचविचार र सावधानी अप्नाउनु पर्ने छ । व्यवसाय तथा कर्मक्षेत्रमा केही बाधा अड्चन परिशानी नहोला भन्न सकिन्न । स्वास्थ्यमा पनि समस्या देखिन सक्ने छ, हृदयका दीर्घरोगीहरुले विशोष ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ । यदाकदा बिरोधीहरुले चक्रब्यूह रच्नसक्ने तर्फ पनि चनाखो एवं सावधानी हुन जरुरी छ । उपर्युक्त प्रतिकूलताको बाबजुत व्यवहारिक तरिकाबाट सजगता अप्नाइ आफ्नो कर्तव्यपथमा रत्रहनाले आकस्मिक लाभ एवं उपलब्धि भै निराशपन हट्ने छ । भगवान पवनपुत्र हनुमानको आराधना तपाईँको लागि आज हितकर हुनेछ ।
वृष राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन विपरितलिङ्गी तर्फको आकर्षण बढ्ने तथा आमोद–प्रमोदको चाहनामा बृद्धि हुने छ । व्यवसायिक उन्नति हुनाले केहीहद्सम्म आर्थिक सङ्कलन हुनेछ भने आफन्तिको शुभसन्देश प्राप्त गर्नसकिने छ । औपचारिक कार्यक्रम आदिको निमन्त्रणा मिल्नसक्ने छ । चोटपटक आदिको भय पनि देखिएकोले यात्राको हकमा भने अल्लि विचारपुर्याउन पर्ने देखिएको छ । प्रेम तथा विवाहको प्रस्ताव आउनसक्ने छ । व्यापारमुखी कार्यले बढी सफलता दिनसक्ने छ । आज यहाँलाई सात अंक, सेतो रङ्ग शुभ हुनेछ भने हनुमान भगवानको दर्शनभक्ति गर्नुले अनिष्ट गोचरदोषलाई निवारण गर्न मद्दत हुनेछ । शुभप्रद हुनेछ ।
मिथुन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन अनुकूल मान्न सकिन्छ । आरोग्यता मिल्ने र कान्तिमा बृद्धि हुनेछ भने शत्रुका विरुद्ध वचस्व कायम गर्न सकिने छ । अवसर तथा समयको सदुपयोग गर्ने चेष्टा बढाएमा प्रतिस्पर्धामा विजयी भइने र सफलता हात लाग्नेछ । लक्ष्मीकृपा बढ्ने योग परेकोले व्यवसायिक कार्यक्षेत्रबाट पनि राम्रो आर्थिक उपलब्धि गर्न सक्नुहुने छ । विपक्षिको सम्मान गर्न जानेको खण्डमा यहाँको ईज्जत बढ्ने छ । आज यहाँलाई हरियो रंग, छ अंक अनुकूल रहने छ भने भगवान महावीर हनुमानको स्तुति एवं दर्शनभक्ति गर्नु शुभकर हुनेछ ।
कर्कट राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन तपाईँको विचारमा रणनीतिक सिद्धान्तले प्रसय पाउनेछ । व्यवहारमा केही अहंभावको पनि झलक नआउला भन्नसकिन्न । तथापि विद्याविनयता र तर्कबल एवं प्राज्ञिककर्मले उदाहरणीय भूमिका प्राप्त गर्न सकिनेछ । नीतिगत तथा कुट्नैतिक कार्यको प्रस्तुतिमा सफलता र प्रशंसा पनि मिल्ने छ । कलाकौशलता बढ्दो रहनेछ भने दार्शनिक तथा सैद्धान्तिक पक्षमा खरो उत्रन सकिने छ । व्यापार व्यवसायबाट लाभ एवम् सन्तुष्टि मिल्ने छ । सन्तानको क्षेत्रमा देखिएको समस्यामा कमी आउनेछ । विद्यार्थीवर्गले आजको दिनको बढी फाइदा उठाउन सकिनेछ । विद्वतवर्गका व्यक्तिलाई ज्ञानविवेकको प्रशंसा मिल्ने योग छ, भद्रतालाई बढाउनुपर्ला । प्रतिष्ठा र छविको बचस्व स्थापित गर्नसकिने छ ।
कन्या राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन पराक्रम गर्नसकिने र सुखद एवम् अनुकूल रहनेछ । शारीरिक स्फुर्ति बढ्ने हुनाले पौरख गर्न सकिनेछ । काममा मनग्य रुचि बढेर आउनाले रोकिएर रहेका काम पूरा गर्न सक्नुहुने छ । महत्त्वपूर्ण काममा सहयोग पनि मिल्नसक्ने छ । दाजुभाईबीचको सम्बन्धमा सुधार आउने छ । व्यवसायिक कामबाट आर्थिक लाभ हुनसक्ने लक्षण प्रतित भइरहेको छ । सहयोगी हातहरु पनि जुट्ने छन् भने मान्छेहरुबाट तपाईँको क्रियाशिलताको प्रशंसा पनि मिल्नेछ । आज यहाँको लागि तीन अङ्क र हरियो रङ्गको प्रयोग गर्नु फापसिद्ध हुनेछ भने माँ नवदुर्गाको दर्शनभक्तिले थप सफलता प्राप्त गर्न मद्दत हुनेछ ।
तुला राशिहुनेहरुको लागि आजको दिन आर्थिक धन सञ्चय हुने ग्रहगोचर परेको हुनाले व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्रो धनलाभ गर्नसकिने छ । कसैकसैलाई पेशा इतरको क्षेत्रबाट पनि अर्थलाभ हुनसक्ने छ भने गुप्तधन प्राप्ति हुनसक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । यथोचित उपलब्धी हुनाले काममा हर्ष उल्लास एवम् उत्साह बढ्ने छ । वाणीको ओज बढ्ने हुनाले बोलीबचनले मान्छेहरुलाई प्रभाव पार्न पनि सकिने छ । परोपकार एवम् समाज सेवाका कामकार्यमा पनि सरिक हुने तथा भूमिका निर्वाह गर्ने मौका मिल्नसक्ने छ । आज यहाँको लागि दुई अंक, सेतो रङ्ग उपयोगी हुनेछ भने शिव शक्तिको आराधना पूण्यप्रद हुनेछ ।
वृश्चिक राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन सौहार्दपूर्ण उत्साह एवम् उमङ्गको वातावरणमा बित्ने देखिन्छ । इष्टजनहरुको आगमनले शोभायमान वातावरण बन्नेछ भने औपचारिकतानिर्वाहको लागि व्यस्ततापूर्ण दिनचर्या रहनेछ । कसैकसैको लागि निमन्त्रणा तथा मिष्ठान्न आदिलेस्वागत सत्कारको अवसर प्राप्त हुनेछ । व्यापार एवम् व्यवसायिक कार्यबाट राम्रो फाइदा उठाउन सक्नु हुनेछ । राजकाज तथा नोकरी आदिमा पनि ग्रहले उपयुक्त भूमिका निर्वाह गरेको हुनाले सन्तोष प्राप्ति हुनेछ । अन्य पेशाकर्मीको लागि पनि लाभ मिल्नेछ । सारांसमा आज यहाँहरुलाई व्यस्तताको बाबजुत पनि सफलताको कारण मानसिक शान्ति र सन्तोष प्राप्त हुनेछ । आज एक अङ्क, पहेंलो रङ्गको प्रयोग र माँ महाकालीको दर्शन एवं भक्ति गर्नु उपयुक्त रहनेछ ।
धनु राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन सामान्य कार्यलाई पनि बढी मेहनत गर्नुपर्ने दिन रहेको छ । विचार नपुर्याइ जोशमा आएर कुनै पनि विषयको आसक्ति नगरेकै राम्रो हुनेछ । फजुल खर्च तथा यात्रा आदिलाई ग्रह स्थितिले प्रोत्साहन गरिरहेकोले सोँचविचार नगरी गरिएको कामले पश्चाताप पार्नपनि सक्नेछ ख्याल पुर्याउनु होला । पारिवारिक वा प्रेमसम्बन्धमा पनि केही वितृष्णा पैदा हुनसक्ने छ । हतोत्साहित नभइ आफ्नो कार्यमा लगनशीलतापूर्वक लागिरहनाले अन्तिममा केही लाभ हातपार्न सकिनेछ । यहाँको लागि आज तीन अङ्क र पहेंलो रङ्गको उपयोग गर्नु हितकर हुनेछ भने नगरी नहुने कार्यमा सफलताको लागि माँ जगद्कालीको दर्शन भक्ति तथा स्तुति गर्नु हितकर हुनेछ ।
मकर राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन लक्ष्मीकृपाको योग परेको देखिन्छ । तसर्थ व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्रो आम्दानी गर्नसकिने छ । विद्यार्थीहरु परीक्षामार खेलाडि तथा शारीरिक प्रतिस्पर्धीहरु प्रतिस्पर्धामा उर्तिण तथा विजयी हुनसकिने छ । सन्तानको पक्षबाट पनि सन्तोष मिल्नेछ । अधुरा रहेका कामहरुलाई पूर्णता दिने गरी दिनको सदुपयोग गर्नाले अझ बढी सन्तोष लिनसकिने छ । विवाह योग्य युवायुवतीको लागि पनि जोडी भेटिन सक्ने ग्रहप्रभाव रहेको छ । आज यहाँलाई दुई अंक, सेतो रङ्गको प्रयोग शुभ हुनेछ भने माँ महाकाली वन्दना गर्नु हितप्रद हुनेछ ।
मीन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न ग्रहले अबरोध सृजना गरेको देखिन्छ । तथापि धार्मिक–आध्यात्मिक सत्चिन्तनले मानसिक शान्ति मिल्ने छ । सामान्यतया दैनिक एवं व्यवहारिक कामकार्य चल्ने नै छन् । विद्वान एवं मान्यपक्षबाट अदृष्य रोकावट आउनसक्ने छ । मनोबललाई उच्च नै राख्नु उपयुक्त हुनेछ । प्रेमसम्बन्धले उचाइ लिनेछ भने विवाह प्रस्तावले प्रसय पाउने छ । आज यहाँको लागि नौ अङ्क, पहेंलो रङ्गको प्रयोग र भगवान सिद्धिविनायकको साथमा माँ बगलामुखीको श्रद्धाभक्ति एवं दर्शन गर्नु फलप्रद हुनेछ । गुरु जनको आर्शिवादले पनि विशेष भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।